40 qofood oo dalka Uganda ugu dhimatay cudurka Daacuunka – Radio Muqdisho
Hay’adda Laan qayrta Cas ayaa sheegtay inay Xeryaha Qaxootiga ee Dalka Yugaandha ku geeriyoodeen 40 Qof oo kasoo jeedda Dalka Koongada Dimoqraadiga ah, kuwaasoo kasoo cararay colaadaha ka aloosan Dalka Koongo.
War qoraal ah oo kasoo baxay hay’adda Laanqayrta cas ayaa lagu sheegay inay Cudurkani sabab u tahay xaalad nadaafad darro oo ka jirta Xeryaha Qaxootiga Dalka Yugaandha, iyadoo ay Isbitaallada si is daba joog ah usoo gaarayaan bukaannada.
Laan qayrta cas ayaa sidoo kale sheegtay inay hayaan Kiisas ka badan 2,000 , isla markaana ay la tacaalayaan, iyadoo ay hay’addu tilmaantay in helitaanka Biyo nadiif ah iyo faya-dhowr habboon ay tahay mid ka mid ah baahida ugu waaweyn ee ay qabaan Qaxootiga reer Koongo ee Yugaandha jooga.
Hay’adda Isku tallaabta cas ayaa Qaxootiga kasoo jeeda Koongada Dimoqraaddiga ah ku qiyaasatay 70,000 Qof, waxanay Dadkan oo 80% ah Carruur iyo Haween Dalka Yugaandha tageen billowgii Sanadkan 2018-ka.
Tartanka orodka gaaban oo lagu soo gabagabeeyay Muqdisho+ Sawirro